Global Voices teny Malagasy » Koety : Fisamborana Mpisera Twitter Hafa Indray · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 13 Novambra 2011 9:28 GMT 1	 · Mpanoratra Mona Kareem Nandika (fr) i Abdoulaye Bah, Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Koety, Mediam-bahoaka
Nandia fotoan-tsarotra ny fahafahana maneho hevitra amin'ny alalan'ny serasera tamin'ity taona 2011 ity tao Koety. Mbola tsy niharan'ny fanorisorenana matetika tahaka izao ny mpiserasera raha tsy tao anatin'izay volana maromaro izay. Nanomboka ny volana aprily lasa teo, mpiserasera telo no nosamborina ary nahazo sazy an-tranomaizina noho ny fanehoan-kevitra an-tserasera nataon'izy ireo, tsy nijanona hatreo anefa ny fisamborana tsy an-kiato fa nipaka hatramin'ireo mpisera Twitter izay nosamborina vao haingana ihany koa, ary noafahana tao anatin'ny 24 ora avy eo noho ny hatezerana teo amin'ny olom-pirenena sy ny mpikambana ao amin'ny antenimiera manoloana izany fisamborana izany. Hamad AlOlayan sy Tariq Al-Mutairi , mpiserasera ao amin'ny Twitter malaza amin'ny fanankianany ny Praiminisitra; nosokajiana ho toy ny fanitsakitsahana ny andiany faha-54 ao amin'ny lalampanorenanana ny sasany tamin'ny tweet nalefan'izy ireo vao haingana, lalàna izay mandrara ny fanehoan-kevitra mikasika ny emira amin'ny maha ” filoham-pirenena azy sy tsy azo henjehina”. Nandà ny fiampangana azy ireo mpisera Twitter roa ary nanambara fa hafa mihitsy no nandraisana ny teny. Na dia efa noafahana aza anefa izy ireo, dia mbola hiatrika famotorana indray noho ny fitoriana napetraky ny minisiteram-panjakana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/11/13/25195/
 mpiserasera telo : https://advocacy.globalvoicesonline.org/2011/09/28/kuwait-three-netizens-detained/